Challenge The Good News Paper - Kubvisa pamuviri haisi iyo mhinduro (Shona)
Kubvisa pamuviri haisi iyo mhinduro (Shona)
Achiva napamuviri aine makore gumi namasere, Joy Thindiwa akapihwa zano rokupabvisa asi Mwari vaivawo nehumwe hurongwa. Achitaura Joy anoti "panguva iyoyo hupenyu hwakanga hwakandiomera zvikuru nokuda kwokuti ndakanga ndabata pamuviri ndirikuchikoro uye mukomana wangu akanga asingadi zvemwana." Nyangwe zvavo Joy akanga amopindawo kereke pakukura kwake, akange azozvisarudzirawo nzira yake oga naizvozvo akanga atarisana nezvibereko zvekusateerera Mwari zvokurar nomurume akanga asina kumuroora.
Joy anobvuma achiti "Mufundisi wekereke yaipindwa nemhuri yangu akambonditsanangurira kuti Jesu aiva ari apo pandaiva namakore gumi namashanu, asi ini handina kuona Jesu sa Ishe nemuponesi wangu panguva iyoyo, zvisineyi ndakatosarudza kuramba ndichirarama munzira dzangu dzakare".
Joy paakanga ava namakore gumi namasere akazviona zvino atarisana neyaya yokuda kuuraya mwana aiva mudumbu make, achifunga kuti aisazogona kumuchengeta. Joy anorangarira kuti. "Ndakatanga kunzwa ndichibatwa nemhosva mumwoyo apo chiremba akandijekesera kuri kana pamuriri pakangobviswa ndaisazokwanisa kuona mwana wandiainge ndakatakura zvakare, ndakaona kuti chiremba uyu aiva nehanya zvikuru uye aisada kuti ndibvise pamuviri." Joy akatanga kuona kuti ainge akakanganisa zvikuru paakarara nemukomana wake nokuti kubvisa pamuviri kwaitova kuwedzera kutadza. Joy anoti "Ndakaona kuti ndaifanira kunamata kuti Mwari vandiregerere pamwe nokurarama maringe nezvokwadi yebhaibheri pane kurarama munzira dzangu dzakare."
Apa ndipo paakapa hupenyu hwake kunaMwari uye nokuvimba naye paanenge oda rubatsiro. Ndakarega kubvisa pamuviri, ndakazobatsirwa nemwana mukomana anodaro achinyemwerera Joy. "Kubva ipapa Mwari vanotichengeta uye ndinomutenda kuti Mwari vanotondibatsirawo kubhadhara mari yechikoro – mwanakomana wangu anenjere zvikuru uye anoda kuvaChiremba nerimwe zuva.
Mwari vakanaka uye ndinofara kuti ndakavimba navo! Joy anoti dzimwe nguva anokundikana kurarama sezvinodiwa naMwari asi anofara kuti Mwari anoregerera uye anobatsira nokumuratidza kuita sarudzo dzakanaka apo achivimba avo. •
<< Aborsie nie die antwoord nie (Afrikaans)